Allgedo.com » Madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu soo laabtay Kismaayo iyo Maxamuud Sayid oo soo dhaweeyay.
Madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu soo laabtay Kismaayo iyo Maxamuud Sayid oo soo dhaweeyay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islam oo magaalada Muqdisho uga qayb galay shirkii madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ayaa garoonka Diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa kusoo dhoweeyey galabta Madaxweyne Ku xigeenka Koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno kamid ah golaha Wasiirada Dowlad Goboleedkada Jubbaland, Xildhibaano iyo Madaxda kale oo kamid ah Dawlad goboleedka jubbaland.
Madaxweynaha ayaa soo dhoweyn kaddib waxa uu saxaafadda kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha Kismaayo wuxuuna sheegay in uu guul kusoo dhamaaday shirkii Madaxda Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada ee lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Sidii la isaga kaashan lahaa adkeynta nabadgelyada iyo caawinta dadka ay abaarahu Saameeyeen ayuu sheegay Madaxweyne Axmed Madoobe in sifiican loogu lafa guray kulamadii Muqdisho, wadahadalka Galmudug iyo Ahlusunna ayuu soo hadal qaaday ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in madaxda Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada ay ku balameen in ay siwanaagsan u wada shaqeeyaan.
Shirkii Madaxda Dowladda dhexe iyo Dowlad Gobaleedyada oo ahaa kii ugu horeeyey ee dhaca intii ay Jirtay Dowladda cusub ayaa kusoo dhamaaday is-afgarad iyo Wada Shaqayn buuxda.